Barnaamijka Tiktok Oo La Ogaaday In Dawladda Shiinuhu Ay U Adeegsato Inay Wax Ku Basaasto | Hangool News
Hangoolnews:- Shabakadda xidhiidhka bulshada ee Tiktok ayaa qarka u saaran in ay dawlado badani isticmaalkiisa mamnuucaan kaddib markii ay soo baxeen warar xaqiijinaya in uu yahay adeeg ay dawladda Shiinuhu wax ku basaasto. Shabakadda Tiktok oo ka mid ah shabakadaha loogu isticmaalka badan yahay dunida maanta ayaa la sheegay in uu awood u leeyahay xaditaanka xogta ku kaydsan taleefannada lagu shubo, kaddibna uu ku diri karo qalab internet ka ku shaqaynaya oo uu sirdoonka Shiinuhu kaydinta xogtaas iyo kala saaristeeda ugu talagalay.
Warbixin uu baahiyey wargeyska ‘The Sun’ eek a soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in sirdoonka Shiinuhu uu si joogto ah u helo xogta boqollaal milyan oo ka mid ah dadka isticmaalka adeeggan ee dunida oo dhan kala jooga. Arrintan ayaa ay dawlado badan oo adduunka ahi u arkaan in ay khatar ku tahay amniga qarankooda. Maadaama oo ay aaminsan yihiin in dawladda Shiinuhu qalabkan xogo badan kaga heli doonto dalalkaas.
Dawladda Ustareeliya ayaa hadda ka fikiraysa in ay mamnuucdo shabakaddan, dalka Hindiya ayaa isaguna hore u mamnuucay adeeggan, iyada oo ka dareen qabta in lagu basaasi karo. Tallaabada dalka Hindiya ayaa timi waqti yar kaddib markii dagaal dhimasho ciidan keenay uu Hindiya iyo Shiinaha ku dhex maray xuduudka ay wadaagaan. TikTok oo lagu wadaago muuqaallo aan 60 ilbidhiqsi ka badnayn oo maadays u badan, waxa aanu sannadihii u dambeeyey si aad ah ugu faafay guud ahaan adduunka.